(5) - BookCubicle
Anna : Coffee Chapter (4/5) Thanks for coffee nya~~ sis Whitewind076
အပိုငျး - ၅ : တကယျတော့ ခနျ့ဝသေျောက လူကောငျးကလေး။
ဒီနသေူ့တို့ကြောငျးလေးမှာ အရမျးကို အံ့သွစရာကိစ်စတဈခုဖွဈသှားတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ခနျ့ဝသေျော ဆိုငျကယျနောကျမှာ ယှနျးခြီပါလာတာပါပဲ။ ကြောငျးဝနျးထဲကို သူတို့ဆိုငျကယျဝငျလာတာကို မွငျလိုကျရတဲ့ လူတှဆေိုရငျ အံ့အားသငျ့လှနျးလို့ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့။ သူတို့ ဒီမွငျကှငျးကို ကွုံရာလူကိုပွောတော့တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောဆိုငျကယျနောကျမှာ ပါလာတဲ့ သတငျးက တဈကြောငျးလုံးမှာ သတငျးမှေးကုနျတော့တာပေါ့။
မုနျ့ဈေးတနျးက ပေါငျမုနျ့နဲ့နှားနို့ဘူးကိုငျပွီး ပွနျလာတဲ့ ယှနျးခြီတဈယောကျ သူအတနျးထဲဝငျလာတာကို မွငျတာနဲ့ သူ့ဆီ အပွေးလာကွတဲ့ ရှဆေုံ့းတနျးက ကောငျမလေးတဈသိုကျကို လနျ့သှားရတယျ။ သူ့ ခွလှေမျးက အတနျးထဲတောငျ မရောကျသေးဘူး။ ဘယျလိုဖွဈလို့ သူ့ဆီကိုလူတှကေ သရှောကပွနျလာတဲ့လူတဈယောကျလို ဝမျးသာအားရပွေးလာကွတာလဲ။
ပါးစပျလေးဟရုံရှိသေး အတနျးဝငျပေါကျ Slide တံခါးက ရှီခနဲ့ပှငျ့လာတော့တယျ။
ယှနျးခြီရဲ့ မုနျ့နဲ့နို့ဘူးကိုပိုကျထားရငျး ပွုံးပွလာတဲ့အပွုံးက ခနျ့ဝသေျောကို ရုတျတရကျယှနျးခြီခေါငျးကို ပုတျပေးခငျြစိတျကို ပျေါသှားစတေယျ။ ခနျ့ဝသေျောကလညျး လူဆိုးလေးဆိုပမေဲ့ သူသူငါငါလူသားလေးတဈယောကျလို ခဈြစရာကောငျးတဲ့အရာတှကေို သဘောကတြာပါပဲ။ ခနျ့ဝသေျောမကျြလုံးထဲမှာ ယှနျးခြီက အမှေးပှပှနဲ့ ပါပီလေးတဈကောငျ တူတယျ။ cup size Pomeranian puppy လေးတဈကောငျလိုပဲ။ ခှကျလေးထဲထညျ့ပွီး သူ ယူသှားခငျြတယျ။ ယှနျးခြီကို ကြောပေးလိုကျတာနဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မကျြနှာက အေးတိအေးစကျပဲ။ တလောကလုံးကို သူ စိတျမကွညျတာနဲ့ မီးလောငျတိုကျသှငျးမဲ့ နတျဆိုးတဈပါးလိုပေါ့။
“ယှနျးခြီ နငျ့ကို သူ အနိုငျကငျြ့သေးလား…”
ကောငျမလေးတဈယောကျက တိုးတိုးလေးမေးတယျ။ ယှနျးခြီ ပလုတျတုတျတုတျလေးလို ခေါငျးကိုယမျးနအေောငျခါပွီး သူ့ နို့ဘူးကိုဖောကျတယျ။ အတနျးမစသေးဘူးဆိုတော့ သူတို့တှေ မုနျ့စားစကားမြားလို့ရသေးတယျလေ။
“တကယျကွီးလား ဟုတျလို့လား… မကွောကျနဲ့နျော… သူ့ဦးလေးက ကြောငျးအုပျဖွဈတော့လညျး ဘာဖွဈလဲ သူ အနိုငျကငျြ့ခငျြတိုငျး အနိုငျကငျြ့လို့မရဘူး! ငါတို့ သှားတိုငျမှာ…”
ပွောမဲ့သာပွောတာ မိနျးကလေးတှကေ ယှနျးကိုသာ အမွငျကပျတာ ယှနျးခြီကိုတော့ခဈြကွတယျ။ အဲ့သလို တှေးရတိုငျး ယှနျးခြီစိတျထဲ စနိုးစနောငျ့နဲ့။ တကယျဆို ယှနျးကလညျး သူပဲ။ ယှနျးခြီကလညျး သူပဲ။ ဒီလူတှဟော ဘယျလိုတောငျမြားပါလိမျ့။
“အနိုငျမကငျြ့ပါဘူး တကယျပွောတာ… ပေါငျမုနျ့စားဦးမလား…”
“သူ နငျ့မုနျ့ဖိုးတှမြေား အနိုငျကငျြ့ယူနလေား?”
ယှနျးခြီရယျခငျြခငျြနဲ့ပဲ ခေါငျးခါတယျ။ ဒီသူငယျခငျြးမတှကေ လှယျမနဘေူး။ သူတို့ရဲ့အတှေးတှကေ တကယျကိုပါပဲ။
“နောကျပွီး ကွကျမောကျသီးက အရမျးကွီးလညျး မဆိုးပါဘူး…”
ကောငျမလေးတဈယောကျ မကျြလုံးအဝိုငျးသားနဲ့မေးတယျ။ ယှနျးခြီခေါငျးကိုညိတျပွီးတော့ ပါးစပျဟတယျ။ သူတို့နှဈယောကျ မနကျကြောငျးလာတုနျးက အကွောငျးကိုပွောပွဖို့ပေါ့။
မနကျကြောငျးလာတုနျးက ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုလာချေါတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကသူ့ကို လာချေါမယျလို့ မပွောခဲ့တဲ့အတှကျ ယှနျးခြီတျောတျောအံ့သွရသေးတယျ။ ဒီနတေ့ော့ သူ့မိဘတှကေ အစညျးအဝေးရှိတာကွောငျ့ စာသငျထှကျသှားကွလရေဲ့။ အိမျရှရေ့ောကျနပွေီဆိုတဲ့ ခနျ့ဝသေျောကွောငျ့ ယှနျးခြီနံနကျစာတောငျ မစားနိုငျတော့ဘူး အသားကုနျပွေးထှကျလာရတယျ။ နောကျတော့ သူတို့နှဈယောကျ ကြောငျးကို လာကွတယျ။ လမျးမှာ ခနျ့ဝသေျောက သူ မနကျစာ မစားရသေးဘူးဆိုတာကို သိပွီးခြိနျမှာ သူတို့ကြောငျးကနျတငျးရဲ့အကောငျးဆုံး ပေါငျမုနျ့ဆိုတာနဲ့ နို့တဈဘူးဝယျပေးတယျ။
သွျောအဲ့ဒါမတိုငျခငျတော့ သူတို့လမျးသှားနရေငျးနဲ့ သဈသီးတှနျးလှညျးတှနျးနတေဲ့ ဈေးသညျအဖိုးအိုတဈယောကျကို မွငျလိုကျတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောက ဆိုငျကယျကိုမပွောမဆိုနဲ့ရပျလိုကျသေးတယျ။ အဲ့ဒီလိုရပျလိုကျတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ ဆိုငျကယျစီးဦးထုတျခငျြးက ဂှကျခနဲတိုကျမိသှားတာပေါ့။ ယှနျးခြီတဈယောကျ မူးဝဝေတေောငျ ဖွဈသှားသလိုလိုပဲ။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ဆိုငျကယျနားမှာထားခဲ့ပွီး အဖိုးအိုကို လှညျးဝိုငျးတှနျးပေးတယျ။ ပွီးတော့မှ ဆိုငျကယျဆီတဈခေါကျပွနျပွေးလာပွီး သူတို့ ကြောငျးဆကျလာခဲ့တာ။
ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျော အနောကျကို ပွနျမလာရအောငျ သူ ဆိုငျကယျနဲ့လိုကျပေးမယျဆိုပမေဲ့လညျး ဆိုငျကယျကအကွီးမို့ သူ့ကို ဆိုငျကယျမနိုငျပဲနလေိမျ့မယျလို့ပွောပွီး ခနျ့ဝသေျောထားခဲ့တယျ။ ယှနျးခြီ နှုတျခမျးနညျးနညျးဆူခငျြပမေဲ့လညျး ခနျ့ဝသေျောက ဂရုတစိုကျနဲ့ဆကျဆံတာကွောငျ့ ပွောမနတေော့ပါဘူး။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို စိတျပူလို့ အခုလိုပွောတာလနေျော။
ဒီလိုနဲ့မနကျစာမစားရသေးတဲ့ ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျောက မနကျပိုငျးကြောငျးကနျတငျးကို ချေါလာခဲ့တယျ။ လူကနြတေဲ့ကနျတငျးဆိုတာ ယှနျးခြီဘယျတုနျးကမှ ခွဦေးမလှညျ့တဲ့နရောတဈခုပါ။ ယှနျးခြီက လူတိုးခံရတာမြိုးကိုလညျး မခံနိုငျဘူးလေ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနတေ့ော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အသုံးဝငျမှုကို ယှနျးခြီကောငျးကောငျးသိသှားတယျ။ ခနျ့ဝသေျောအရိပျကိုလညျး တှရေ့ော ပေါငျမုနျ့ဝယျဖို့တိုးကွိတျနတေဲ့လူအုပျကွီးက ခကျြခငျြးကို လမျးခငျးပေးလိုကျတယျ။ ဒါက ဘာနဲ့တူလဲဆိုရငျ ယှနျးခြီဖတျဖူးတဲ့ စိတျကူးယဉျသိုငျးဇာတျလမျးတှထေဲကလို ပငျလယျကထကျခွမျးကှဲပွီး လမျးဖွဈသှားသလိုပဲ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ အနနေညျးနညျးလေးတောငျ မခကျဘဲ ပေါငျမုနျ့ကို ဝယျလာပေးတယျ။ နောကျတော့ သူ့ကိုနှားနို့တဈဘူးဝယျပေးပွနျတယျ။ ဒီပေါငျမုနျ့ကနို့ဘူးသောကျရငျး စားရငျပိုကောငျးတယျတဲ့။
ယှနျးခြီရဲ့နှုတျခမျးတှကေ ခပျယောငျယောငျလေးကော့တကျသှားတယျ။ သူကတော့ မသိမသာလို့ပဲ သူ့ကိုယျသူထငျတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး မိနျးကလေးတှကေ အငျမတနျအကငျးပါးကွတဲ့ သတ်တဝါတှလေေ။ ယှနျးခြီတဈယောကျ တဈခုခုကို တှေးပွီးပွုံးလိုကျတယျဆိုတာကို သူတို့ကောငျးကောငျးသိတာပေါ့။ ဒီနှဈယောကျကွားမှာ ဘာရှိလဲလို့ သူတို့ စတှေးလာတယျ။ တှေးနလေို့မှမဆုံးသေးဘူး။ ယှနျးခြီက ခပျပွုံးပွုံးနဲ့…
“တကယျပါ သူ ငါ့ကို အနိုငျမကငျြ့ပါဘူး…”
ယှနျးခြီဟာ သူ့အပွုံးက ရှကျပွုံးဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။ ယှနျးခြီရဲ့မိနျးကလေးအပေါငျးအသငျးတှကေတော့ ယှနျးခြီနဲ့ခနျ့ဝသေျောကွားတဈခုခုရှိလိမျ့မယျဆိုတာကို တပျအပျသိလိုကျခဲ့တယျ။ ဘာကွောငျ့ဆိုအခြို့သောအရာတှကေ ကာယကံရှငျထကျ ဘေးလူက ပိုသိတာမြိုးလေ ဟုတျတယျမဟုတျလား။
ဒီလိုနဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ယှနျးခြီကြောငျးအတူလာကွတဲ့သတငျးက ကြောငျးသားတှကွေားမှာ version အမြိုးမြိုးနဲ့ ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျ ဖွဈနခေဲ့တာပေါ့။ တခြို့က ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို သူ့ရဲ့ခိုငျးဖကျလေးလုပျတယျလို့ ပွောကွတယျ။ တခြို့ကတော့ ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောကို အကွှေးတငျနတောတဲ့။ တခြို့ကတော့ ယှနျးခြီက မိနျးကလေးဆနျတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောကို ကပျနတေယျပွောတယျ။ တခြို့ကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အကွိုကျက ယောကျြားလေးတှတေဲ့။ နောကျဆုံးတဈခုကတော့ သမားရိုးကအြဖွဈဆုံးနဲ့ လကျတှနေဲ့အနီးစပျဆုံးလို့ ပွောရမယျ။ သူတို့နှဈယောကျက Assignment အတူတူလုပျရမဲ့ သူတှမေို့လို့ အခုလိုရငျးရငျးနှီးနှီးနကွေတာပါပေါ့။
တတျလညျးတတျနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ။ ခနျ့ဝသေျောရော၊ ယှနျးခြီ နှဈယောကျလုံး ဒီကိစ်စတှကေို ပွနျကွားတဲ့အခြိနျမှာ တှေးမိကွတာပါ။
“ဘယျလိုတောငျ တှေးလိုကျကွတာလဲ ငါ့ရုပျက အနိုငျကငျြ့တဲ့ရုပျမြိုးပေါကျနလေို့လား?”
ကြောငျးခေါငျမိုးပျေါက ခုံတနျးလေးမှာ နှဈယောကျထိုငျရငျး သူတို့ထမငျးစားနကွေတယျ။ ခနျ့ဝသေျောစကားကွောငျ့ ယှနျးခြီပါးစောငျထဲမှာ ထမငျးလုတျပလုတျပလောငျးနဲ့ ပွုံးပွီးခေါငျးယမျးတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ရူးတူးတူးပုံစံက ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးကို ခယျြရီတှဖေုံးလိုကျသလိုပဲ။ နလေ့ညျခငျးဖွဈတာကွောငျ့ အအေးဓာတျရှိနပေမေဲ့လညျး ရာသီဥတုကနှေးထှေးလှနျးနခေဲ့တယျ။ ပါးနှဈဖကျလုံးကို ဆှဲညှဈလိုကျခငျြနတေဲ့အခြိနျမှာ ယှနျးခြီက မွိုခလြိုကျတယျ။ ပွီးတော့…
“မပေါကျပါဘူး သူတို့က မငျးအကွောငျးကို သခြောမသိလို့ပါ”
“ဘာပဲဖွဈဖွဈ မငျးက သဘောကောငျးတယျဆိုတာ သူတို့မသိလညျး ငါသိတယျဟုတျပွီလား…”
ယှနျးခြီစကားက လူဆိုးလေးတဈယောကျရဲ့စိတျကိုတျောတျောဘဝငျကသြှားစခေဲ့တယျ။ လူဆိုးလေးရဲ့စိတျကူးကမ်ဘာလေးထဲမှာ ယှနျးခြီရဲ့စကားက ပနျးတှပှေငျ့စခေဲ့တယျ။ ဒါကိုတော့ ယှနျးခြီဟာ သိမနခေဲ့ပါဘူး။
“Assignment ကို မငျးအိမျမှာလုပျမလား…”
“အငျး ငါ့အိမျမှာလုပျလို့ရတယျ… ဒါနဲ့ ငါ တဈခုမေးလို့ရမလား…”
ယှနျးခြီမေးခှနျးကို ယှနျးခြီထမငျးဘူးထဲက ဟငျးနှိုကျရငျးနဲ့ခနျ့ဝသေျော ခေါငျးညိတျပွတယျ။
“မငျး ဆံပငျတှကေ ဘာလို့အနီရောငျတှဖွေဈနရေတာလဲ…”
“အနီရောငျကမိုကျတယျလေ… ငါ အနီရောငျသဘောကတြယျ…”
ခနျ့ဝသေျောပွောတယျ။ ပွီးတော့ သူ ဆကျပွောသေးတယျ။
“ငါ ငယျငယျတုနျးက ပါဝါရိမျးဂြားအနီကောငျဖွဈခငျြခဲ့တာ…”
ခနျ့ဝသေျောစကားကွောငျ့ ယှနျးခြီရယျတယျ။ ပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောကို သခြောကွညျ့ပွီး…
“အခုတော့ မငျးက boku no hero acamedia ထဲက bakugo ကို ဆံပငျအနီ Version ဖွဈနပွေီ…”
“ရုပျတူပါတယျ… အမွဲတမျး မှုနျကုတျနတောပဲလေ…”
“မဟုတျရငျ လူတှကေ အာရုံနောကျဖို့ကောငျးတယျ…”
ခနျ့ဝသေျောကပွနျဖွတေယျ။ ပွီးတော့ သူ ဆကျပွောတယျ။
“အဲ့လိုသာ ငါမကျြမှောငျကွုတျမနရေငျ ငါ့ကို Model Scout လုပျတဲ့လူတအားမြားတယျ… ငါ ကိုယျရညျသှေးတာ မဟုတျဘူးနျော…”
ခနျ့ဝသေျောစကားကို ယှနျးခြီခေါငျးညိတျပွီး နားလညျကွောငျးပဲပွောတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ခပျခြောခြောကောငျလေး တဈယောကျပါ။ တဈခြိနျလုံး မကျြမှောငျတှကွေုတျနပေမေဲ့ အနညျးဆုံး ယှနျးခြီရှမှေ့ာတော့ ခနျ့ဝသေျောက မကျြမှောငျကွုတျမနဘေူး။ ဒါကွောငျ့ သူခြောတာကို ယှနျးခြီသိတာပေ့ါ။
“မငျးမှာလညျး ငါ့ကို မေးခငျြတာတှမြေားလိုကျတာ…”
ယှနျးခြီခပျတိုးတိုးရယျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ဘုဘောကျပွောတာဆိုပမေဲ့ မမေးစခေငျြလို့ပွောတာမြိုး မဟုတျဘူးဆိုတာကို သူသိတယျလေ။ ယှနျးခြီဆိုတာ ခနျ့ဝသေျောကို သှေးတိုးအစမျးနိုငျဆုံးသော လူသားလေးတဈယောကျပေါ့။ သူ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ viber က တဈဆငျ့အမြားကွီးခတျြဖူးတာမို့ ခနျ့ဝသေျောအကွောငျးကို သိသငျ့သလောကျတော့ သိနပေါပွီ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးကို သဘောကနြတောကွောငျ့လားတော့ မသိဘူး။ သူ့ကို ကောငျးကောငျးဆကျဆံတယျ။ ဘာလို့ဆို ခနျ့ဝသေျောက သူနဲ့ယှနျးက တူတယျလို့ပွောတယျလေ။
အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ကိုယျ့ကိုတဈစုံတဈယောကျနဲ့တူတာကွောငျ့ ကောငျးနတောမြိုးကို ဘယျလူကတော့ သဘောမကပြါဘူး။ ယှနျးက သူကိုယျတိုငျဖွဈနလေညျးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျော သူနဲ့ရငျးရငျးနှီးနှီးနတောကိုတော့ ယှနျးခြီ စိတျအနှောငျ့အယှကျမဖွဈမိဘူး။ ဘာလို့ဆို ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို သူက ပိုလှတယျလို့ပွောတယျလေ။ အဲ့တော့ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ ရငျးနှီးရတာကို သူ့ စိတျထဲသိပျအနှောငျ့အယှကျမဖွဈနဘေူး။
အဲ့ဒီအကွောငျးကိုတှေးရငျးနဲ့ သူကနြေပျသှားတာကွောငျ့ ယှနျးခြီသူ့ ခွထေောကျကိုလှုပျနတေော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ ယှနျးခြီကို အသဲတယားယားကွညျ့လို့ပေါ့။
ခနျ့ဝသေျောစိတျထဲမှာ တှေးနမေိတယျ။ သူ့စိတျက ပုံမှနျရော ဟုတျသေးရဲ့လားပေါ့။ ဘာလို့ယှနျးခြီဘာလုပျလုပျ ခဈြစရာကောငျးတယျလို့ သူ ထငျနရေတာလဲ။ ဒီစိတျက နညျးနညျးလေးမှ ပုံမှနျမဟုတျဘူး။ သူ ယှနျးခြီကို စိတျဝငျစားနတောလား? ဒါဆို ယှနျးကရော… သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးကရော။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးကို စိတျထဲကနေ အားနာနတေော့တယျ။ ရငျထဲမှာအလှနတျဘုရားမလေးတဈယောကျတညျးကိုပဲ သဘောကပြါမယျဆိုပွီး သူ အခု အခွားတဈယောကျကို စိတျထဲထညျ့နတေယျလေ။
ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောရဲ့ဘုဘောကျစကားကို မမှုဘဲ မေးခှနျးကိုပဲ ဆကျမေးတယျ။
“မငျးဘာလို့ ကောငျလေးတဈယောကျကို သူ ဝတျတဲ့အကြီ င်္အရောငျကို မကွိုကျလို့ ထိုးလိုကျတာလဲ… မငျး ငါ့ကို Assignment တဈဖှဲ့တညျးကတြာလားလို့ လာမေးတုနျးက ငါဘယျလောကျမြားကွောကျသှားတယျထငျလဲ… ငါ့စိတျထဲမှာ မငျးမကွိုကျတဲ့ အရောငျကိုဝတျထားတာကွောငျ့လို့ထငျနတော… ငါ ဘယျလောကျထိ ကွောကျသှားလဲ မငျးသိလား…”
နလေ့ညျစာစားပွီး မုနျ့ဘူးထဲမှာပါလာတဲ့ မုနျ့စားနရေငျးကနေ ယှနျးခြီ မကျြနှာလေးမဲ့ပွောတယျ။ ဟုတျတယျ။ အဲ့နကေ့ သူ လိပျပွာလှငျ့မတတျကိုကွောကျနတော ခနျ့ဝသေျောမသိဘူး။ ခနျ့ဝသေျော လုံးဝမသိဘူး!
ခနျ့ဝသေျောက စကားကိုပွောသငျ့မပွောသငျ့စဉျးစားတယျ။ ယှနျးခြီက သူ့ကိုအထငျလှဲတာလညျး မခံခငျြဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီကိစ်စကိုလညျး သူ ထုတျမပွောပွခငျြဘူး။ ဒါက သူထိုးလိုကျတဲ့ကောငျရဲ့ သိက်ခာနဲ့လညျးဆိုငျတယျလေ။ အဲ့ကောငျက အကငျြ့မကောငျးတဲ့ ကောငျတဈကောငျဖွဈနလေညျးပေါ့။
“မငျး ဒီကိစ်စကို တခွားသူကို ပွနျမပွောဘူးလို့ ကတိပေးမှာလား…”
နောကျဆုံးတော့ ယှနျးခြီအထငျလှဲတာကို မခံခငျြတဲ့စိတျက အလေးသာသှားတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော ပွောပွဖို့ပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ယှနျးခြီကိုတော့ ကတိအရငျတောငျးလိုကျတာပေါ့။ တကယျလို့ ယှနျးခြီကတိမတညျခဲ့ရငျလညျး သူ စိတျဆိုးမှာတော့မဟုတျပါဘူး။ သူ ထိုးလိုကျတဲ့ကောငျက လူကောငျးတဈယောကျမှမဟုတျတာ။ လူကောငျးလို့ ထငျရပမေဲ့လညျးပေါ့။
“အငျး ငါ ကတိပေးပါတယျ…”
ယှနျးခြီခပျလှယျလှယျပဲ ကတိပေးလိုကျတယျ။ ဘာလို့ဆို သူက အတငျးပွောရတာသဘောမကဘြူးလေ။ နောကျပွီး သူ ပွောမိလညျး ဟနျနာလောကျပဲရှိတာ။ ဟနျနာက သူတို့ကြောငျးမှာကြောငျးတကျတာမဟုတျလို့ ဒီအကွောငျးကို ပွောပွမိလညျး ပွဿနာတော့ မရှိနိုငျပါဘူး။
“အဲ့ဒီကောငျက မိနျးကလေးတှနေဲ့အတူနတေယျ… သူ့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျရသှားရငျ တာဝနျမယူဘူး… သူ့ကွောငျ့ မိနျးကလေးတှနေဈနာရတယျ…”
ယှနျးခြီရဲ့ဝိုငျးစကျသှားတဲ့မကျြလုံးကို ခနျ့ဝသေျောစိုကျကွညျ့တယျ။ ဝိုငျးစကျနတေဲ့ မကျြလုံးတှမှော သူ့ရဲ့တညျကွညျနတေဲ့ ပုံရိပျက ထငျဟပျနလေရေဲ့။
“ဒါပမေဲ့ သူလုပျတာလို့တော့ နာမညျမထှကျဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အိမျက မွို့မကျြနှာဖုံးဖွဈတာကွောငျ့ အိမျက မိနျးကလေးတှကေို ပိုကျဆံပေးဖုံးတယျ… နောကျပွီး တခွားသူတှကေ အဲ့ကောငျရဲ့ကိုယျစား နာမညျမကောငျးတာ ခံပေးတယျလေ…”
ဘယျလောကျပဲ အေးခမျြးတယျကောငျးမှနျတယျပဲဆိုဆို အရာတဈခုက အပွဈအနာအဆာလေးတော့ ရှိတာပါပဲ။ ယှနျးခြီခဈြတဲ့မွို့လေးကလညျး ဒီလိုပဲ အမှောငျဘကျခွမျးလေးတှတေော့ ရှိတာပေါ့။ ဘယျအရာတဈခုကမှ လငျးမနနေိုငျဘူးမဟုတျလား။ ဖနျဆငျးမှုတှကေ အကောငျးအဆိုး၊အလငျးအမှောငျနဲ့တဈခါတညျး အတူဖွဈတညျလာတာပါ။
“ငါ အဲ့ကောငျကို တတျနိုငျသမြှကွိုးစားရှောငျပါတယျ… ဒါပမေဲ့…”
ခနျ့ဝသေျော သကျပွငျးရှိုကျတယျ။ မကျြလှာခပြွီးတော့ မဆုံးသေးတဲ့ စကားကို သူဆကျပွောလရေဲ့။
“အဲ့ကောငျကို မွငျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ငါ ဘယျလိုမှ မထိုးဘဲ မနနေိုငျလိုကျဘူး… သူက မကောငျးတာကွောငျ့လို့လဲ ငါ မပွောခငျြဘူး သူ မကောငျးဘူးဆိုပမေဲ့ အခုကြောငျးသားဘဝမှာတော့ အညှနျ့ခြိုးတာမြိုး ငါ မဖွဈစခေငျြဘူးလေ… ဒါကွောငျ့… ငါ သူဝတျလာတဲ့ အရောငျကို မကွိုကျဘူးလို့ပဲ ပွောခဲ့တာ…”
ခနျ့ဝသေျောက တကယျ့ကို အတှငျးစိတျကလေးနူးညံ့တဲ့ကောငျကလေးတဈယောကျလို့ ထငျရကျစရာကို မရှိပါဘူး။ မကျြလှာခပြွောနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကိုကွညျ့ပွီး ယှနျးခြီရငျတှေ တဒိတျဒိတျခုနျလာခဲ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အခုလိုမြိုး ပုံစံကို ဘယျသူမှ မမွငျဖူးဘူးလို့ သူ ထငျတယျ။ သူတဈယောကျတညျးက ခနျ့ဝသေျောရဲ့အခုလိုပုံစံမြိုးကို မွငျဖူးတာလား။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့တဈယောကျတညျးကိုပဲ ပွောပွတာလား။ အတှေးနဲ့ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာလေးနီလာတော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောလညျး အသံတိတျနတေဲ့ ယှနျးခြီကွောငျ့ သူ မကျြလုံးပွနျပငျ့ကွညျ့တော့ ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာလေးက နီနလေရေဲ့။ ဓာတျကူးသှားတာကွောငျ့လားတော့မသိ။ ခနျ့ဝသေျောလညျး နညျးနညျးရှကျသှားပွီး မကျြနှာခပျရဲရဲဖွဈသှားခဲ့တယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ယှနျးခြီရဲ့ အသံတိုးတိုးလေး ထပျထှကျလာခဲ့တယျ။
“မငျးကို သူတို့ဘာမှ မလုပျဘူးမဟုတျလား မငျး အဲ့ဒါကို သိနတေော့ မငျးကို သူ့အိမျက တဈခုခုလုပျဖို့ကွိုးစားရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ…”
ယှနျးခြီရဲ့အသံသေးသေးလေးကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့မကျြနှာက နီရဲတကျသှားတော့တယျ။ ယှနျးခြီက သူ့ကို စိတျပူတာလား။ သူ့ကို သူ့မိသားစုဝငျတှကေလှဲရငျ ပထမဆုံး စိတျပူတဲ့သူက ယှနျးခြီပဲ။ အရမျးကို ရှကျပွီးရငျလညျး ခုနျနတောကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အသံက ခပျတုနျတုနျနဲ့ထှကျလာခဲ့တယျ။
“သူတို့ငါ့ကို မလုပျရဲပါဘူး… စိတျပူပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ…”
ဒီလိုနဲ့ ကြောငျးရဲ့နလေ့ညျစာထမငျးစားဆငျးခြိနျမှာ ကောငျကလေးနှဈယောကျဟာ ခုံတနျးလေးတဈခုပျေါမှာ ထမငျးဘူးလေးကိုယျစီကိုငျရငျး မကျြနှာနီနီနဲ့ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးဝနျးထဲက ပေါမြားတဲ့ခယျြရီပငျတှကွေောငျ့ လအေဝမှေ့ာ ခယျြရီပှငျ့ဖတျတခြို့က သူတို့ဆီကို တဈခကျြခကျြမှာ လှငျ့လာလို့ရယျပေါ့။
အပိုင်း - ၅ : တကယ်တော့ ခန့်ဝေသော်က လူကောင်းကလေး။
ဒီနေ့သူတို့ကျောင်းလေးမှာ အရမ်းကို အံ့သြစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ခန့်ဝေသော် ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ ယွန်းချီပါလာတာပါပဲ။ ကျောင်းဝန်းထဲကို သူတို့ဆိုင်ကယ်ဝင်လာတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့ လူတွေဆိုရင် အံ့အားသင့်လွန်းလို့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့။ သူတို့ ဒီမြင်ကွင်းကို ကြုံရာလူကိုပြောတော့တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ ပါလာတဲ့ သတင်းက တစ်ကျောင်းလုံးမှာ သတင်းမွှေးကုန်တော့တာပေါ့။
မုန့်ဈေးတန်းက ပေါင်မုန့်နဲ့နွားနို့ဘူးကိုင်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ယွန်းချီတစ်ယောက် သူအတန်းထဲဝင်လာတာကို မြင်တာနဲ့ သူ့ဆီ အပြေးလာကြတဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းက ကောင်မလေးတစ်သိုက်ကို လန့်သွားရတယ်။ သူ့ ခြေလှမ်းက အတန်းထဲတောင် မရောက်သေးဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ သူ့ဆီကိုလူတွေက သေရွာကပြန်လာတဲ့လူတစ်ယောက်လို ဝမ်းသာအားရပြေးလာကြတာလဲ။
ပါးစပ်လေးဟရုံရှိသေး အတန်းဝင်ပေါက် Slide တံခါးက ရွီခနဲ့ပွင့်လာတော့တယ်။
ယွန်းချီရဲ့ မုန့်နဲ့နို့ဘူးကိုပိုက်ထားရင်း ပြုံးပြလာတဲ့အပြုံးက ခန့်ဝေသော်ကို ရုတ်တရက်ယွန်းချီခေါင်းကို ပုတ်ပေးချင်စိတ်ကို ပေါ်သွားစေတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကလည်း လူဆိုးလေးဆိုပေမဲ့ သူသူငါငါလူသားလေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကို သဘောကျတာပါပဲ။ ခန့်ဝေသော်မျက်လုံးထဲမှာ ယွန်းချီက အမွှေးပွပွနဲ့ ပါပီလေးတစ်ကောင် တူတယ်။ cup size Pomeranian puppy လေးတစ်ကောင်လိုပဲ။ ခွက်လေးထဲထည့်ပြီး သူ ယူသွားချင်တယ်။ ယွန်းချီကို ကျောပေးလိုက်တာနဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မျက်နှာက အေးတိအေးစက်ပဲ။ တလောကလုံးကို သူ စိတ်မကြည်တာနဲ့ မီးလောင်တိုက်သွင်းမဲ့ နတ်ဆိုးတစ်ပါးလိုပေါ့။
“ယွန်းချီ နင့်ကို သူ အနိုင်ကျင့်သေးလား…”
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က တိုးတိုးလေးမေးတယ်။ ယွန်းချီ ပလုတ်တုတ်တုတ်လေးလို ခေါင်းကိုယမ်းနေအောင်ခါပြီး သူ့ နို့ဘူးကိုဖောက်တယ်။ အတန်းမစသေးဘူးဆိုတော့ သူတို့တွေ မုန့်စားစကားများလို့ရသေးတယ်လေ။
“တကယ်ကြီးလား ဟုတ်လို့လား… မကြောက်နဲ့နော်… သူ့ဦးလေးက ကျောင်းအုပ်ဖြစ်တော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ သူ အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူး! ငါတို့ သွားတိုင်မှာ…”
ပြောမဲ့သာပြောတာ မိန်းကလေးတွေက ယွန်းကိုသာ အမြင်ကပ်တာ ယွန်းချီကိုတော့ချစ်ကြတယ်။ အဲ့သလို တွေးရတိုင်း ယွန်းချီစိတ်ထဲ စနိုးစနောင့်နဲ့။ တကယ်ဆို ယွန်းကလည်း သူပဲ။ ယွန်းချီကလည်း သူပဲ။ ဒီလူတွေဟာ ဘယ်လိုတောင်များပါလိမ့်။
“အနိုင်မကျင့်ပါဘူး တကယ်ပြောတာ… ပေါင်မုန့်စားဦးမလား…”
“သူ နင့်မုန့်ဖိုးတွေများ အနိုင်ကျင့်ယူနေလား?”
ယွန်းချီရယ်ချင်ချင်နဲ့ပဲ ခေါင်းခါတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းမတွေက လွယ်မနေဘူး။ သူတို့ရဲ့အတွေးတွေက တကယ်ကိုပါပဲ။
“နောက်ပြီး ကြက်မောက်သီးက အရမ်းကြီးလည်း မဆိုးပါဘူး…”
ကောင်မလေးတစ်ယောက် မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့မေးတယ်။ ယွန်းချီခေါင်းကိုညိတ်ပြီးတော့ ပါးစပ်ဟတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် မနက်ကျောင်းလာတုန်းက အကြောင်းကိုပြောပြဖို့ပေါ့။
မနက်ကျောင်းလာတုန်းက ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုလာခေါ်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ကသူ့ကို လာခေါ်မယ်လို့ မပြောခဲ့တဲ့အတွက် ယွန်းချီတော်တော်အံ့သြရသေးတယ်။ ဒီနေ့တော့ သူ့မိဘတွေက အစည်းအဝေးရှိတာကြောင့် စာသင်ထွက်သွားကြလေရဲ့။ အိမ်ရှေ့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကြောင့် ယွန်းချီနံနက်စာတောင် မစားနိုင်တော့ဘူး အသားကုန်ပြေးထွက်လာရတယ်။ နောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် ကျောင်းကို လာကြတယ်။ လမ်းမှာ ခန့်ဝေသော်က သူ မနက်စာ မစားရသေးဘူးဆိုတာကို သိပြီးချိန်မှာ သူတို့ကျောင်းကန်တင်းရဲ့အကောင်းဆုံး ပေါင်မုန့်ဆိုတာနဲ့ နို့တစ်ဘူးဝယ်ပေးတယ်။
သြော်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်တော့ သူတို့လမ်းသွားနေရင်းနဲ့ သစ်သီးတွန်းလှည်းတွန်းနေတဲ့ ဈေးသည်အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်တာကြောင့် ခန့်ဝေသော်က ဆိုင်ကယ်ကိုမပြောမဆိုနဲ့ရပ်လိုက်သေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုရပ်လိုက်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုတ်ချင်းက ဂွက်ခနဲတိုက်မိသွားတာပေါ့။ ယွန်းချီတစ်ယောက် မူးဝေဝေတောင် ဖြစ်သွားသလိုလိုပဲ။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ဆိုင်ကယ်နားမှာထားခဲ့ပြီး အဖိုးအိုကို လှည်းဝိုင်းတွန်းပေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ဆိုင်ကယ်ဆီတစ်ခေါက်ပြန်ပြေးလာပြီး သူတို့ ကျောင်းဆက်လာခဲ့တာ။
ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော် အနောက်ကို ပြန်မလာရအောင် သူ ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ဆိုင်ကယ်ကအကြီးမို့ သူ့ကို ဆိုင်ကယ်မနိုင်ပဲနေလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီး ခန့်ဝေသော်ထားခဲ့တယ်။ ယွန်းချီ နှုတ်ခမ်းနည်းနည်းဆူချင်ပေမဲ့လည်း ခန့်ဝေသော်က ဂရုတစိုက်နဲ့ဆက်ဆံတာကြောင့် ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို စိတ်ပူလို့ အခုလိုပြောတာလေနော်။
ဒီလိုနဲ့မနက်စာမစားရသေးတဲ့ ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော်က မနက်ပိုင်းကျောင်းကန်တင်းကို ခေါ်လာခဲ့တယ်။ လူကျနေတဲ့ကန်တင်းဆိုတာ ယွန်းချီဘယ်တုန်းကမှ ခြေဦးမလှည့်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ယွန်းချီက လူတိုးခံရတာမျိုးကိုလည်း မခံနိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့အသုံးဝင်မှုကို ယွန်းချီကောင်းကောင်းသိသွားတယ်။ ခန့်ဝေသော်အရိပ်ကိုလည်း တွေ့ရော ပေါင်မုန့်ဝယ်ဖို့တိုးကြိတ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက ချက်ချင်းကို လမ်းခင်းပေးလိုက်တယ်။ ဒါက ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ယွန်းချီဖတ်ဖူးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သိုင်းဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို ပင်လယ်ကထက်ခြမ်းကွဲပြီး လမ်းဖြစ်သွားသလိုပဲ။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ အနေနည်းနည်းလေးတောင် မခက်ဘဲ ပေါင်မုန့်ကို ဝယ်လာပေးတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကိုနွားနို့တစ်ဘူးဝယ်ပေးပြန်တယ်။ ဒီပေါင်မုန့်ကနို့ဘူးသောက်ရင်း စားရင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့။
ယွန်းချီရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက ခပ်ယောင်ယောင်လေးကော့တက်သွားတယ်။ သူကတော့ မသိမသာလို့ပဲ သူ့ကိုယ်သူထင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း မိန်းကလေးတွေက အင်မတန်အကင်းပါးကြတဲ့ သတ္တဝါတွေလေ။ ယွန်းချီတစ်ယောက် တစ်ခုခုကို တွေးပြီးပြုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာရှိလဲလို့ သူတို့ စတွေးလာတယ်။ တွေးနေလို့မှမဆုံးသေးဘူး။ ယွန်းချီက ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့…
“တကယ်ပါ သူ ငါ့ကို အနိုင်မကျင့်ပါဘူး…”
ယွန်းချီဟာ သူ့အပြုံးက ရှက်ပြုံးဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။ ယွန်းချီရဲ့မိန်းကလေးအပေါင်းအသင်းတွေကတော့ ယွန်းချီနဲ့ခန့်ဝေသော်ကြားတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တပ်အပ်သိလိုက်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုအချို့သောအရာတွေက ကာယကံရှင်ထက် ဘေးလူက ပိုသိတာမျိုးလေ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
ဒီလိုနဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ ခန့်ဝေသော်နဲ့ယွန်းချီကျောင်းအတူလာကြတဲ့သတင်းက ကျောင်းသားတွေကြားမှာ version အမျိုးမျိုးနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။ တချို့က ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို သူ့ရဲ့ခိုင်းဖက်လေးလုပ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တချို့ကတော့ ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ကို အကြွေးတင်နေတာတဲ့။ တချို့ကတော့ ယွန်းချီက မိန်းကလေးဆန်တာကြောင့် ခန့်ဝေသော်ကို ကပ်နေတယ်ပြောတယ်။ တချို့ကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့အကြိုက်က ယောကျာ်းလေးတွေတဲ့။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သမားရိုးကျအဖြစ်ဆုံးနဲ့ လက်တွေ့နဲ့အနီးစပ်ဆုံးလို့ ပြောရမယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က Assignment အတူတူလုပ်ရမဲ့ သူတွေမို့လို့ အခုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေကြတာပါပေါ့။
တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ။ ခန့်ဝေသော်ရော၊ ယွန်းချီ နှစ်ယောက်လုံး ဒီကိစ္စတွေကို ပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာ တွေးမိကြတာပါ။
“ဘယ်လိုတောင် တွေးလိုက်ကြတာလဲ ငါ့ရုပ်က အနိုင်ကျင့်တဲ့ရုပ်မျိုးပေါက်နေလို့လား?”
ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ်က ခုံတန်းလေးမှာ နှစ်ယောက်ထိုင်ရင်း သူတို့ထမင်းစားနေကြတယ်။ ခန့်ဝေသော်စကားကြောင့် ယွန်းချီပါးစောင်ထဲမှာ ထမင်းလုတ်ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ ပြုံးပြီးခေါင်းယမ်းတယ်။ ယွန်းချီရဲ့ရူးတူးတူးပုံစံက ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ချယ်ရီတွေဖုံးလိုက်သလိုပဲ။ နေ့လည်ခင်းဖြစ်တာကြောင့် အအေးဓာတ်ရှိနေပေမဲ့လည်း ရာသီဥတုကနွေးထွေးလွန်းနေခဲ့တယ်။ ပါးနှစ်ဖက်လုံးကို ဆွဲညှစ်လိုက်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာ ယွန်းချီက မြိုချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့…
“မပေါက်ပါဘူး သူတို့က မင်းအကြောင်းကို သေချာမသိလို့ပါ”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းက သဘောကောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့မသိလည်း ငါသိတယ်ဟုတ်ပြီလား…”
ယွန်းချီစကားက လူဆိုးလေးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုတော်တော်ဘဝင်ကျသွားစေခဲ့တယ်။ လူဆိုးလေးရဲ့စိတ်ကူးကမ္ဘာလေးထဲမှာ ယွန်းချီရဲ့စကားက ပန်းတွေပွင့်စေခဲ့တယ်။ ဒါကိုတော့ ယွန်းချီဟာ သိမနေခဲ့ပါဘူး။
“Assignment ကို မင်းအိမ်မှာလုပ်မလား…”
“အင်း ငါ့အိမ်မှာလုပ်လို့ရတယ်… ဒါနဲ့ ငါ တစ်ခုမေးလို့ရမလား…”
ယွန်းချီမေးခွန်းကို ယွန်းချီထမင်းဘူးထဲက ဟင်းနှိုက်ရင်းနဲ့ခန့်ဝေသော် ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။
“မင်း ဆံပင်တွေက ဘာလို့အနီရောင်တွေဖြစ်နေရတာလဲ…”
“အနီရောင်ကမိုက်တယ်လေ… ငါ အနီရောင်သဘောကျတယ်…”
ခန့်ဝေသော်ပြောတယ်။ ပြီးတော့ သူ ဆက်ပြောသေးတယ်။
“ငါ ငယ်ငယ်တုန်းက ပါဝါရိမ်းဂျားအနီကောင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ…”
ခန့််ဝေသော်စကားကြောင့် ယွန်းချီရယ်တယ်။ ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ကို သေချာကြည့်ပြီး…
“အခုတော့ မင်းက boku no hero acamedia ထဲက bakugo ကို ဆံပင်အနီ Version ဖြစ်နေပြီ…”
“ရုပ်တူပါတယ်… အမြဲတမ်း မှုန်ကုတ်နေတာပဲလေ…”
“မဟုတ်ရင် လူတွေက အာရုံနောက်ဖို့ကောင်းတယ်…”
ခန့်ဝေသော်ကပြန်ဖြေတယ်။ ပြီးတော့ သူ ဆက်ပြောတယ်။
“အဲ့လိုသာ ငါမျက်မှောင်ကြုတ်မနေရင် ငါ့ကို Model Scout လုပ်တဲ့လူတအားများတယ်… ငါ ကိုယ်ရည်သွေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်…”
ခန့်ဝေသော်စကားကို ယွန်းချီခေါင်းညိတ်ပြီး နားလည်ကြောင်းပဲပြောတယ်။ ခန့်ဝေသော်က ခပ်ချောချောကောင်လေး တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ချိန်လုံး မျက်မှောင်တွေကြုတ်နေပေမဲ့ အနည်းဆုံး ယွန်းချီရှေ့မှာတော့ ခန့်ဝေသော်က မျက်မှောင်ကြုတ်မနေဘူး။ ဒါကြောင့် သူချောတာကို ယွန်းချီသိတာပေ့ါ။
“မင်းမှာလည်း ငါ့ကို မေးချင်တာတွေများလိုက်တာ…”
ယွန်းချီခပ်တိုးတိုးရယ်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က ဘုဘောက်ပြောတာဆိုပေမဲ့ မမေးစေချင်လို့ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူသိတယ်လေ။ ယွန်းချီဆိုတာ ခန့်ဝေသော်ကို သွေးတိုးအစမ်းနိုင်ဆုံးသော လူသားလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ သူ ခန့်ဝေသော်နဲ့ viber က တစ်ဆင့်အများကြီးချတ်ဖူးတာမို့ ခန့်ဝေသော်အကြောင်းကို သိသင့်သလောက်တော့ သိနေပါပြီ။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းကို သဘောကျနေတာကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ သူ့ကို ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်။ ဘာလို့ဆို ခန့်ဝေသော်က သူနဲ့ယွန်းက တူတယ်လို့ပြောတယ်လေ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ့်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တူတာကြောင့် ကောင်းနေတာမျိုးကို ဘယ်လူကတော့ သဘောမကျပါဘူး။ ယွန်းက သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလည်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခန့်ဝေသော် သူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတာကိုတော့ ယွန်းချီ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်မိဘူး။ ဘာလို့ဆို ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို သူက ပိုလှတယ်လို့ပြောတယ်လေ။ အဲ့တော့ ခန့်ဝေသော်နဲ့ ရင်းနှီးရတာကို သူ့ စိတ်ထဲသိပ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နေဘူး။
အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးရင်းနဲ့ သူကျေနပ်သွားတာကြောင့် ယွန်းချီသူ့ ခြေထောက်ကိုလှုပ်နေတော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ ယွန်းချီကို အသဲတယားယားကြည့်လို့ပေါ့။
ခန့်ဝေသော်စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိတယ်။ သူ့စိတ်က ပုံမှန်ရော ဟုတ်သေးရဲ့လားပေါ့။ ဘာလို့ယွန်းချီဘာလုပ်လုပ် ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ သူ ထင်နေရတာလဲ။ ဒီစိတ်က နည်းနည်းလေးမှ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ သူ ယွန်းချီကို စိတ်ဝင်စားနေတာလား? ဒါဆို ယွန်းကရော… သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးကရော။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးကို စိတ်ထဲကနေ အားနာနေတော့တယ်။ ရင်ထဲမှာအလှနတ်ဘုရားမလေးတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သဘောကျပါမယ်ဆိုပြီး သူ အခု အခြားတစ်ယောက်ကို စိတ်ထဲထည့်နေတယ်လေ။
ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ရဲ့ဘုဘောက်စကားကို မမှုဘဲ မေးခွန်းကိုပဲ ဆက်မေးတယ်။
“မင်းဘာလို့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သူ ဝတ်တဲ့အကျီ င်္အရောင်ကို မကြိုက်လို့ ထိုးလိုက်တာလဲ… မင်း ငါ့ကို Assignment တစ်ဖွဲ့တည်းကျတာလားလို့ လာမေးတုန်းက ငါဘယ်လောက်များကြောက်သွားတယ်ထင်လဲ… ငါ့စိတ်ထဲမှာ မင်းမကြိုက်တဲ့ အရောင်ကိုဝတ်ထားတာကြောင့်လို့ထင်နေတာ… ငါ ဘယ်လောက်ထိ ကြောက်သွားလဲ မင်းသိလား…”
နေ့လည်စာစားပြီး မုန့်ဘူးထဲမှာပါလာတဲ့ မုန့်စားနေရင်းကနေ ယွန်းချီ မျက်နှာလေးမဲ့ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အဲ့နေ့က သူ လိပ်ပြာလွင့်မတတ်ကိုကြောက်နေတာ ခန့်ဝေသော်မသိဘူး။ ခန့်ဝေသော် လုံးဝမသိဘူး!
ခန့်ဝေသော်က စကားကိုပြောသင့်မပြောသင့်စဉ်းစားတယ်။ ယွန်းချီက သူ့ကိုအထင်လွဲတာလည်း မခံချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စကိုလည်း သူ ထုတ်မပြောပြချင်ဘူး။ ဒါက သူထိုးလိုက်တဲ့ကောင်ရဲ့ သိက္ခာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လေ။ အဲ့ကောင်က အကျင့်မကောင်းတဲ့ ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေလည်းပေါ့။
“မင်း ဒီကိစ္စကို တခြားသူကို ပြန်မပြောဘူးလို့ ကတိပေးမှာလား…”
နောက်ဆုံးတော့ ယွန်းချီအထင်လွဲတာကို မခံချင်တဲ့စိတ်က အလေးသာသွားတာကြောင့် ခန့်ဝေသော် ပြောပြဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယွန်းချီကိုတော့ ကတိအရင်တောင်းလိုက်တာပေါ့။ တကယ်လို့ ယွန်းချီကတိမတည်ခဲ့ရင်လည်း သူ စိတ်ဆိုးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ ထိုးလိုက်တဲ့ကောင်က လူကောင်းတစ်ယောက်မှမဟုတ်တာ။ လူကောင်းလို့ ထင်ရပေမဲ့လည်းပေါ့။
“အင်း ငါ ကတိပေးပါတယ်…”
ယွန်းချီခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ကတိပေးလိုက်တယ်။ ဘာလို့ဆို သူက အတင်းပြောရတာသဘောမကျဘူးလေ။ နောက်ပြီး သူ ပြောမိလည်း ဟန်နာလောက်ပဲရှိတာ။ ဟန်နာက သူတို့ကျောင်းမှာကျောင်းတက်တာမဟုတ်လို့ ဒီအကြောင်းကို ပြောပြမိလည်း ပြဿနာတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။
“အဲ့ဒီကောင်က မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူနေတယ်… သူ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် တာဝန်မယူဘူး… သူ့ကြောင့် မိန်းကလေးတွေနစ်နာရတယ်…”
ယွန်းချီရဲ့ဝိုင်းစက်သွားတဲ့မျက်လုံးကို ခန့်ဝေသော်စိုက်ကြည့်တယ်။ ဝိုင်းစက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ သူ့ရဲ့တည်ကြည်နေတဲ့ ပုံရိပ်က ထင်ဟပ်နေလေရဲ့။
“ဒါပေမဲ့ သူလုပ်တာလို့တော့ နာမည်မထွက်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့အိမ်က မြို့မျက်နှာဖုံးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်က မိန်းကလေးတွေကို ပိုက်ဆံပေးဖုံးတယ်… နောက်ပြီး တခြားသူတွေက အဲ့ကောင်ရဲ့ကိုယ်စား နာမည်မကောင်းတာ ခံပေးတယ်လေ…”
ဘယ်လောက်ပဲ အေးချမ်းတယ်ကောင်းမွန်တယ်ပဲဆိုဆို အရာတစ်ခုက အပြစ်အနာအဆာလေးတော့ ရှိတာပါပဲ။ ယွန်းချီချစ်တဲ့မြို့လေးကလည်း ဒီလိုပဲ အမှောင်ဘက်ခြမ်းလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ဘယ်အရာတစ်ခုကမှ လင်းမနေနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ ဖန်ဆင်းမှုတွေက အကောင်းအဆိုး၊အလင်းအမှောင်နဲ့တစ်ခါတည်း အတူဖြစ်တည်လာတာပါ။
“ငါ အဲ့ကောင်ကို တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားရှောင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့…”
ခန့်ဝေသော် သက်ပြင်းရှိုက်တယ်။ မျက်လွှာချပြီးတော့ မဆုံးသေးတဲ့ စကားကို သူဆက်ပြောလေရဲ့။
“အဲ့ကောင်ကို မြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ ငါ ဘယ်လိုမှ မထိုးဘဲ မနေနိုင်လိုက်ဘူး… သူက မကောင်းတာကြောင့်လို့လဲ ငါ မပြောချင်ဘူး သူ မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ အခုကျောင်းသားဘဝမှာတော့ အညွန့်ချိုးတာမျိုး ငါ မဖြစ်စေချင်ဘူးလေ… ဒါကြောင့်… ငါ သူဝတ်လာတဲ့ အရောင်ကို မကြိုက်ဘူးလို့ပဲ ပြောခဲ့တာ…”
ခန့်ဝေသော်က တကယ့်ကို အတွင်းစိတ်ကလေးနူးညံ့တဲ့ကောင်ကလေးတစ်ယောက်လို့ ထင်ရက်စရာကို မရှိပါဘူး။ မျက်လွှာချပြောနေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကိုကြည့်ပြီး ယွန်းချီရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာခဲ့တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အခုလိုမျိုး ပုံစံကို ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးဘူးလို့ သူ ထင်တယ်။ သူတစ်ယောက်တည်းက ခန့်ဝေသော်ရဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးကို မြင်ဖူးတာလား။ ခန့်ဝေသော်က သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ပြောပြတာလား။ အတွေးနဲ့ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာလေးနီလာတော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်လည်း အသံတိတ်နေတဲ့ ယွန်းချီကြောင့် သူ မျက်လုံးပြန်ပင့်ကြည့်တော့ ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာလေးက နီနေလေရဲ့။ ဓာတ်ကူးသွားတာကြောင့်လားတော့မသိ။ ခန့်ဝေသော်လည်း နည်းနည်းရှက်သွားပြီး မျက်နှာခပ်ရဲရဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ယွန်းချီရဲ့ အသံတိုးတိုးလေး ထပ်ထွက်လာခဲ့တယ်။
“မင်းကို သူတို့ဘာမှ မလုပ်ဘူးမဟုတ်လား မင်း အဲ့ဒါကို သိနေတော့ မင်းကို သူ့အိမ်က တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…”
ယွန်းချီရဲ့အသံသေးသေးလေးကြောင့် ခန့်ဝေသော်ရဲ့မျက်နှာက နီရဲတက်သွားတော့တယ်။ ယွန်းချီက သူ့ကို စိတ်ပူတာလား။ သူ့ကို သူ့မိသားစုဝင်တွေကလွဲရင် ပထမဆုံး စိတ်ပူတဲ့သူက ယွန်းချီပဲ။ အရမ်းကို ရှက်ပြီးရင်လည်း ခုန်နေတာကြောင့် ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အသံက ခပ်တုန်တုန်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။
“သူတို့ငါ့ကို မလုပ်ရဲပါဘူး… စိတ်ပူပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…”
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းရဲ့နေ့လည်စာထမင်းစားဆင်းချိန်မှာ ကောင်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ ခုံတန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ထမင်းဘူးလေးကိုယ်စီကိုင်ရင်း မျက်နှာနီနီနဲ့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဝန်းထဲက ပေါများတဲ့ချယ်ရီပင်တွေကြောင့် လေအဝေ့မှာ ချယ်ရီပွင့်ဖတ်တချို့က သူတို့ဆီကို တစ်ချက်ချက်မှာ လွင့်လာလို့ရယ်ပေါ့။
MaskMelon 02.12.2019, 13:54 5
MeMo227 29.11.2019, 07:12 5
MoiraMo 27.11.2019, 13:42 5
Khant D 27.11.2019, 11:49 5
ကြက်မောက်သီး ရှက်နေတာလေးက 😍
RaiseRen 27.11.2019, 11:30 5